UMalema uthi i-EFF izimisele ngokunikeza uRamaphosa ithuba | News24
UMalema uthi i-EFF izimisele ngokunikeza uRamaphosa ithuba
Cape Town - Umholi we-EFF uJulius Malema ugibele ebhokisini ePhalamende ngesikhathi kuqhubeka inkulumompikiswano mayelana nenkulumo ebhekiswe esizweni yangoLwesihlanu eyethulwa nguMengameli omusha wezwe uCyril Ramaphosa.
Ngesikhathi ekhuluma uMalema ubelokhu ezwakala ethi "mengameli wami" ebhekise kuRamaphosa.
URamaphosa ubonakale ehlanganisa izandla wabe esenqekuzisa ikhanda, wamamatheka ngesikhathi uMalema embingelela.
"Sizimisele ngokukunikeza ithuba. Sikunikeza ithuba kuphela ngoba awukaze utholakale unecala lokuphambana nomthetho. Izephulamthetho asizincengi," kusho uMalema.
OLUNYE UDABA: UMengameli Zuma ngeke umshayele uDisemba ephethe - Malema
Ube esexwayisa uRamaphosa ukuthi njengoba ebekwe kulesi sikhundla akuso akusho ukuthi usengcono kunabanye abantu.
"Awuyona inkosi, ngakho kumele uziphathe njengomholi bese usebenzela abantu," esho.
UMalema uqhube ngokuthi uma kukhona umuntu omelene nokubuyiselwa komhlaba kubanikazi bawo, lowo muntu akehlukile nesitha sabantu. "Lolu daba luvusa imizwa," esho.
UMalema ube esekhuluma ebhekise kumholi we-DA uMmusi Maimane wathi: "Ngifuna ukumxwayisa ukuthi ukuqhubeka kwabo baphathe komasipala abakhulu kuncike ekutheni bangakoluphi uhlangothi mayelana nodaba lomhlaba."
Ngaphambilini kusukume uMaimane wathi uRamaphosa kuzomele aqale manje akhuculule iKhabhinethi ngokuthi afake amasondo kongqongqoshe abathile.
Ube esebagagula ngamagama:
Mr President, show South Africa you are really serious about fighting corruption in your party and fire: